Semalt: karazana mailaka sy fanamarihana spam mety azonao
Tsara ny manamarika fa maherin'ny 92% amin'ny webmaster sy bilaogera no vizana amin'ny mailaka sy spam-tsokajy. Indraindray ireo olona nanaiky nandray ny gazetiboky, dia manomboka mandefa mailaka sy tsetsatsetsa-tsetroka manodidina ny famantaranandro. Ny fanatrehana ireo olana roa ireo dia tsy azo atao afa-tsy rehefa fantatrao ny zava-drehetra momba azy ireo. Eto i Michael Brown, mpitarika Success Manager Manager Semalt , dia nanonona ny karazana mailaka sy spam-tsikaritra izay mety ho azonao mandritra ny fotoana rehetra.
Spam manokana ho an'ny Media Social:
Fantatry ny manam-pahaizana momba ny media sosialy sy ny mpikaroka an-tserasera fa ny spam sosialy dia olana lehibe ho an'ny orinasa sy marika samihafa ao amin'ny aterineto. Na dia sahirana amin'ny fampiroboroboana ny vokatrao sy ny tolotrareo amin'ny media sosialy indrindra indrindra amin'ny Facebook sy Twitter ianao, dia mety ho voafehin'ny spam. Ireo mpampiasa media sosialy sy hackers dia te-hahalala ny momba ny adiresy mailaka sy ny tranonkala. Avy eo dia ampiasainy ity fampahalalana ity mba handefasana hafatra hafahafa na hametraha fanehoan-kevitra manorisory ao amin'ny blôginao; Azo atao izany amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy.
Ny lozam-pifaliana vintana dia mitranga rehefa mitaraina ny olona tsy mahazo loka amin'ny Internet. Ohatra, raha milalao lalao video na mampiasa apps amin'ny Internet ianao, dia azonao atao ny mandresy
Ny fanangonam-bidy na ny fihenam-bidy hividy an-tserasera (Internet)
Ity misy karazana mailaky ny mailaka sy tsikera hafa izay mety hiteraka olana ho anao. Ireo mpampiasa izay maniry ny hahazo ny nofinofy amin'ny fotoana tsy voafetra, matetika dia voafandrika amin'ny spam, ary manomboka mandefa hafatra hafahafa izy ireo. Ireo mpitoraka blaogy izay vao nanangana ny bilaoginy na tranonkala ihany koa dia mety ho lasibatry ny asam-panatrehana asa nofinofy satria ny mpitsoka azy no manafaka azy ireo amin'ny fohy kely amin'ny fahombiazany. Tsy mety ny mifandray amin'ireo olona tsy fantatrao na inona na inona. Mba hiantohana ny fiarovana anao dia tsy tokony hizara URL na adiresy imailaka amin'ny olon-tsy fantatra ianao.
Free IPay Spam:
Raha misy olona manome tolotra iPad malalaka anao, ny vintana dia ny hanery anao hamitaka anao ary mety hangalatra ny fampahalalana mafonja anao. Ity spam ity dia miantso ireo izay tsy mahatakatra ny fahalalana fototra sy ny fahalalan'ny Internet. Ny mailaka rehetra sy ny fanamarihana milaza fa nahazo iPads ianao dia tsara ho an'ny tsy misy. Tsy tokony hanokatra na oviana na oviana ny atiny ary hamaky ny hafany satria ny spammers dia hampiditra ny milina amin'ny malware na viriosy.
Ny matavy dia iray amin'ireo olana goavana eo amin'ny aterineto, ary maro ny olona te handany lanja fanampiny avy hatrany. Indrisy anefa fa tsy misy famintinana azy io, ary mila miasa mafy ianao. Ireo izay milaza fa afaka manjary tsy lany mihitsy ianao dia tena mpitsangantsangana. Mety hamela rohy hiverina any amin'ny tranonkalany ratsy ao amin'ny sehatra fanehoanao izy ireo na mety mandefa mailaka imailaka matetika. Tokony hitandrina ianao raha mizara ny antsipiriany manokana amin'ny olona iray satria ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny aterineto dia mpihomehy Source .